တစ်ဦးကအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကို WINDOWS 8 BOOTING သည့်အခါ - WINDOWS ကို - 2019
အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်၏ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကိုသင် windows 8 ကိုစတငျသညျ့အခါ
အလွန်မကြာခဏ Windows 8 နှင့် 8.1 အသုံးပြုသူများအဖို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် startup မှာထိုကဲ့သို့သောအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်အဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုရှိသေး၏။ အဆိုပါစနစ်အတင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ desktop ပေါ်မှာရှိသမျှသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတုံ့ပြန်သော cursor, ဒါပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ သို့သော်ဤအမှားကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုသို့မဟုတ်အရေးပါသည့်စနစ်ဖိုင်များပျက်စီးခြင်းမှဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤအမှု၌အဘယ်သို့ပြုသနည်း
တစ်ဦးကအနက်ရောင်မျက်နှာပြင် booting အခါဖြစ်စဉ်ကို start-up ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှားအယွင်းများ windose ပေါ်လာသော "Explorer.exe"အဆိုပါ GUI ကို loading အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဘယ်။ အဆိုပါပစ်လွှတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် Avast, သောရိုးရိုးလုပ်ကွက်ကြောင့် antivirus စခွေငျးငှါတားဆီး။ ထို့အပြင်ပြဿနာကိုမဆိုဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသို့မဟုတ်မည်သည့်စနစ်ကဖိုင်တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် - ကအားလုံးကိုအမှားစေသောအဘယ်အရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျနော်တို့ကိုတဖန်စနစ်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်စေသည့်အများဆုံးလုံခြုံပြီးနာကျင်မှု့မရှိတဲ့ options များ, စဉ်းစားပါ။
Method ကို 1: တစ်ဦးပျက်ကွက် update ကိုပြန် Rolling
အမှားပြင်ပေးဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု - စနစ်ပြန်လှိမ့်။ ဒါဟာဒါအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ဖြေရှင်းရန်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများများလွှတ်ပေးရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သော Microsoft ကဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ သင်တစ်ဦး restore point တစ်ခုဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ် bootable flash drive ကိုရှိပါကထိုကွောငျ့, ထို့နောက်ရှေ့ဆက်ပြီး backup လုပ်ထားပါစေ။ Windows 8 system ကို restore ဘယ်လိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်အဘို့, သငျသညျကိုအောကျတှငျတှေ့ရနိုင်သည်
ကိုလည်းကြည့်ပါ: 8 windose တစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူမှုစနစ်စေရန်မည်သို့
နည်းလမ်း 2: « explorer.exe »ကို manually Run
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Task Manager ကို" လူသိများ shortcuts တွေကိုသုံးပြီး ကို Ctrl + Shift + Esc အောက်ခြေမှခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Read more ».
အခုတော့အားလုံးဖြစ်စဉ်များများ၏စာရင်းထဲတွင်ရ "Explorer ကို" နှင့်သူ၏အလုပ်, ညာဘက်ကလစ်လျက်ရွေးဖြည့်စွက် "Task ကိုရပ်တန့်"။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုရှာမတွေ့ပါလျှင်ပြီးသားကိုချွတ်သည်။
ယခုတွင်သင်သည်ကိုယ်တိုင်တူဖြစ်စဉ်ကို execute နိုင်ပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းက menu မှာတော့ကို select "File" နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အသစ်တစ်ခုကိုတာဝန် Start".
စာရင်းအောက်က window တွင်အသင်းကို tick ကို tick checkbox ကိုအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်နှင့်နှိပ်ပါ "အိုကေ":
Method ကို 3: Disable လုပ်ထား antivirus ကို
သငျသညျ Avast Anti-virus ကို install လုပ်ထားကြလျှင်, အဲဒါကိုအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်စဉ်ကိုဖြည့်စွက်ကြိုးစားပါ explorer.exe တစ်ခုခြွင်းချက်အဖြစ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပစ္စည်းမှ navigate "Settings" ကို နှင့်ဖွင့်လှစ်သော window ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသောအကျယ်ချဲ့ "ချွင်းချက်"။ အခုတော့ tab ကိုသွားပါ "ဖိုင်များ Paths" နှင့် button ကို click "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်"။ ဖိုင်ကိုမှလမ်းကြောင်းကို Enter explorer.exe။ antivirus ကိုချန်လှပ်ဖိုင်များကို add ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါဆောင်းပါးကိုတွေ့မြင်:
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ antivirus ကို Avast Free Antivirus မှခြွင်းချက်ထည့်သွင်းခြင်း
Method ကို 4: ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားရန်
လူအပေါင်းတို့၏အဆိုးဆုံး option ကို - မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲရှေ့မှောက်တွင်။ သိပ်ဆိုးဆိုးရွားရွား system files ကိုပျက်စီးသောကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်အပြည့်အဝစကင် Antivirus ကိုစနစ်နှင့်ပင်ပြန်လည်နာလန်ထူ, မကူညီနိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အောက်ပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ, ဒီလုပ်ဖို့ဘယ်လိုတစ်ခုလုံးကို disk ကို C. ပုံစံနှင့်အတူစနစ်သာပြီးပြည့်စုံပြန်လည် install ပြုလုပ်ကူညီပေးသည်:
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows 8 operating system ကိုထည့်သွင်းခြင်း
ကျနော်တို့အထက်နည်းလမ်းများအနည်းဆုံးတဦးတည်းသင်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြည်နယ်မှစနစ်ပြန်လာကူညီမျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိုပြဿနာကိုဆက်ရှိနေသေးပါလျှင် - မှတ်ချက်များအတွက်ရေးနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာဖြေရှင်းရေးအတွက်ကူညီရန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။